Universal Currency စျေး - အွန်လိုင်း UNIT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Universal Currency (UNIT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Universal Currency (UNIT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Universal Currency ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $78 100.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Universal Currency တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Universal Currency များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Universal CurrencyUNIT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0206Universal CurrencyUNIT သို့ ယူရိုEUR€0.0174Universal CurrencyUNIT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0157Universal CurrencyUNIT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0187Universal CurrencyUNIT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.183Universal CurrencyUNIT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.13Universal CurrencyUNIT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.455Universal CurrencyUNIT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0766Universal CurrencyUNIT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0272Universal CurrencyUNIT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0288Universal CurrencyUNIT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.456Universal CurrencyUNIT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.159Universal CurrencyUNIT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.11Universal CurrencyUNIT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.54Universal CurrencyUNIT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.3.47Universal CurrencyUNIT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0282Universal CurrencyUNIT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0315Universal CurrencyUNIT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.639Universal CurrencyUNIT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.143Universal CurrencyUNIT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥2.2Universal CurrencyUNIT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩24.38Universal CurrencyUNIT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦7.97Universal CurrencyUNIT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.51Universal CurrencyUNIT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.565
Universal CurrencyUNIT သို့ BitcoinBTC0.000002 Universal CurrencyUNIT သို့ EthereumETH0.00005 Universal CurrencyUNIT သို့ LitecoinLTC0.000378 Universal CurrencyUNIT သို့ DigitalCashDASH0.000227 Universal CurrencyUNIT သို့ MoneroXMR0.000231 Universal CurrencyUNIT သို့ NxtNXT1.6 Universal CurrencyUNIT သို့ Ethereum ClassicETC0.00303 Universal CurrencyUNIT သို့ DogecoinDOGE5.93 Universal CurrencyUNIT သို့ ZCashZEC0.00025 Universal CurrencyUNIT သို့ BitsharesBTS0.633 Universal CurrencyUNIT သို့ DigiByteDGB0.658 Universal CurrencyUNIT သို့ RippleXRP0.073 Universal CurrencyUNIT သို့ BitcoinDarkBTCD0.000709 Universal CurrencyUNIT သို့ PeerCoinPPC0.0682 Universal CurrencyUNIT သို့ CraigsCoinCRAIG9.37 Universal CurrencyUNIT သို့ BitstakeXBS0.877 Universal CurrencyUNIT သို့ PayCoinXPY0.359 Universal CurrencyUNIT သို့ ProsperCoinPRC2.58 Universal CurrencyUNIT သို့ YbCoinYBC0.00001 Universal CurrencyUNIT သို့ DarkKushDANK6.6 Universal CurrencyUNIT သို့ GiveCoinGIVE44.54 Universal CurrencyUNIT သို့ KoboCoinKOBO4.68 Universal CurrencyUNIT သို့ DarkTokenDT0.0189 Universal CurrencyUNIT သို့ CETUS CoinCETI59.39